Maxay madaxtooyada ka tiri firimbigii lagu yeeriyay Farmaajo? - BBC News Somali
Maxay madaxtooyada ka tiri firimbigii lagu yeeriyay Farmaajo?
6 Juunyo 2020
Waa la cusbooneysiiyay 7 Juunyo 2020
"Xildhibaannadu deegaannadooda dhibaato ayaa lagu hayaa, deegaannadoodu cunaqabateyn ayaa saaran. Anigu Jubaland ayaan ka soo jeedaa dadkeyga waa la cunaqabateeyay, Gedo waxa ka dhacaya waad u jeedaa," ayuu yiri xildhibaan Xasan.
Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil
Kalfadhiga baarlamaanka: Afar arimood oo uu soo qaaday Madaxwyne Farmaajo
Kulanka Farmaajo iyo Muuse Biixi
Yey yihiin "siyaasiyiinta xanaaqsan" ee uu Farmaajo sheegay?
"Geeddi socodka Dowlad dhisidda Soomaaliya heerar kala duwan ayuu soomaray. Waxaa jirtay xilli kala aragti duwanaashaha lagu xallin jiray qori caaraddiis, maantase waxay mareysaa in firimbi loo yeeriyo marka Madaxda laga aragti duwanaado. Waa horumar runtii loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda,"